Mapikicha ekuBritain (September 2015 – August 2016)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Catalan Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Hausa Hungarian Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Telugu Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba
Chikamu 2 Chemapikicha ekuBritain (September 2015 - August 2016)
Zvapupu zvaJehovha zvekuBritain, zviri kutama kubva kuMill Hill, muLondon, zvichienda pedyo neguta reChelmsford, muEssex, riri makiromita anenge 70 nechekumabvazuva. Mapikicha ari pano anoratidza basa rakaitwa pakuvaka mahofisi avo kubva muna September 2015 kusvika muna August 2016.
29 October 2015​—Pachavakirwa Mahofisi Anoona Nezvebasa
Varume vachidira kongiri pamberi pegaraji iro richazoshandiswa pakugadzira michina inoshandisa pabasa rekuvaka.
9 December 2015​—Pachavakirwa Mahofisi Anoona Nezvebasa
Vashandi vari kuisa denga paimba yekudyira uye mahofisi anenge achizoshandiswa panguva inenge ichivakwa nzvimbo iyi.
18 January 2016​—Pachavakirwa Mahofisi Anoona Nezvebasa
Mushandi ari kushandisa excavator pakucheka mimwe miti iri pedyo negedhi rinenge richizopinda nevanhu. Muchina uyu unobata muti, woucheka, wozoutakura. Nzvimbo iyi isati yatanga kushandiswa, pachadyarwa zviuru zvemiti kuti itsive inenge yatemwa.
31 March 2016​—Pachavakirwa bazi
Vashandi vari kubvisa marara ese ari muvhu akasiyiwa nevaimboshandisa nzvimbo iyi. Ivhu iri rinogona kuzocheneswa roshandiswa zvakare.
14 April 2016​—Pachavakirwa bazi
Vashandi vari kugadzirira kushandisa crane kuti vasimudze macabin vachiaendesa paanofanira kugara. Vanhu vachashanda pakuvaka vachashandisa macabin aya semahofisi uye pakuita mamwe mabasa.
5 May 2016​—Pachavakirwa bazi
Vashandi vari kusarudza zvinhu zvinogona kuzoshandiswazve vachizviisa padivi. Komiti yebasa rekuvaka yakaronga kuti 95% yezvinhu zvese zvinenge zvisingakuvadzi ibviswe muvhu. Uyewo 89% yezvinhu zvese zvaida kuzoraswa zvakadai sezvidhinha, kongiri, uye matanda zvakanzi zvizoshandiswa pane rimwe basa richada kuitwa ipapo.
23 May 2016​—Pachavakirwa Mahofisi Anoona Nezvebasa
Mushandi ari kuvhara gomba richange richizofamba nepombi dzinenge dzichienda kumacabin achange achizogara vashandi vekuvaka.
26 May 2016​—Pachavakirwa bazi
Mumwe mushandi achiongorora ivhu kuti aone kuti rinokodzera here kushandiswa pakugadzira migwagwa panzvimbo iyi.
31 May 2016​—Zvichange zvakaita bazi
Musi wa31 May 2016, Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha rakapa mvumo yekuti purani iyi ishandiswe. Basa rekuvaka rava kuda kutanga, sezvo mamwewo mahofisi emunharaunda iyi akatobvumira kuti basa rienderere mberi.
16 June 2016​—Pachavakirwa bazi
Vashandi vari kubvisa marara muvhu ratorwa panzvimbo iyi. Ivhu iri rinogona kuzoshandiswa zvekare. Izvi zvinochengetedza mari nekuti panenge pasisina chikonzero chekunorasa ivhu iri uye chekutsvaga chimwe chinhu chekuisa paimbova nevhu racho.
20 June 2016​—Pachavakirwa bazi
Vashandi vachigadzira nzvimbo ichazoiswa mugwagwa unopinda nevanhu. Vashandi vanoenderera mberi nekuvaka pasinei nekuti mumwedzi uyu mvura iri kunaya chaizvo, uye pasi pazere nematope.
18 July 2016​—Pachavakirwa Mahofisi Anoona Nezvebasa
Migwagwa iri kudirwa mvura kuti guruva risapfumbuka. Kuchengetedza nzvimbo inenge ichivakwa yakachena kunoenderana nemitemo yeConsiderate Constructors Scheme. Komiti yekuvaka yakabvuma kuita zvinotaurwa nesangano iri panyaya dzekuvaka munharaunda iyi. Mutemo wesangano iri unoenderana nezvinotaurwawo neBhaibheri nekuti unokurudzira kuti tiremekedze vamwe.
Mushandi achicheka simbi dzichada kuzoturikwa pombi dzeair-conditioning.
22 July 2016​—Pachavakirwa bazi
Vashandi vari kubvisa matombo kubva muivhu. Sezviri kuratidzwa pamufananidzo uyu, ivhu riri kuiswa mumuchina unosefa ivhu. Muchina uyu une sefa dzakakura zvakasiyana siyana, zvekuti unoparadzanisa ivhu nematombo akakura nemadiki, uye ivhu rakatsetseka ndiro rinozopedzisira rava pasi pawo. Zvadaro ivhu iroro rinozobuda nenzira nhatu, richidirwa muturori tunenge turipo.
Vashandi vari kubvisa rimwe ivhu kuitira kuti zvivako zvizobuda sezviri papurani.
18 August 2016​—Pachavakirwa bazi
Nechekuruboshwe kwemufananidzo uri pano, vashandi vari kupedzisa kuita kuti nzvimbo yacho inyatsoti sandara kuitira kuti faundesheni yedzimba dzekugara itange kucherwa. Nechekumashure kuruboshwe, ndiko kuchazovakwa dzimba dzichange dzichigara vashandi 118.
Chikamu 3 Chemapikicha ekuBritain (September 2016-February 2017)
Mapikicha okuBritain Chikamu 1 (January Kusvika August 2015)
Kuchengetedzwa Kwemhuka muChelmsford